नेशनलले महिला सहयात्रा कतिमा गाभ्दै छ ? « Artha Path
नेशनलले महिला सहयात्रा कतिमा गाभ्दै छ ?
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमीटेडले महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । महिलाले नेशनलसँग मर्जरको लागि ६० प्रतिशतको स्वाप रेसियो मागेको छ । तर, नेशनलले ५५ सम्म दिन सकिने जनाएको थियो । यद्यपि, डीडीएको रिपोर्टअनुसार स्वाप रेसियो तय गरिने जनाइएको छ । सम्भवतः ६० प्रतिशतको स्वाप रेसियोमा आन्तरिक सहमति भएर गाभ्ने/गाभिने सम्झौता भएको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले महिला सहयात्रालाई एक्वायर गर्ने, चुक्ता पूँजी साढे ३७ करोड पुग्ने
नेशनल माइक्रोफाइनान्स ७ प्रदेशका ४३ वटा जिल्लामा फैलिएका ६५ वटा शाखा कार्यालयबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्था हो । यो लघुवित्तमा ४ वाणिज्य बैंकहरूले ४८.५ प्रतिशत, ३ वटा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले १२.५ प्रतिशत, व्यक्तिगत संस्थापकले ९ प्रतिशत र सर्वसाधारणले ३० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको चुक्ता पुँजी २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
महिला सहयात्रा लघुवित्त र नेशनल माइक्रोफाइनान्ससंग मर्जर हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर
यस्तै, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडानम्बर ९ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको महिला सहयात्रा लघुवित्तको सेवा २, ३, ४ र ५ प्रदेशका विभिन्न १८ जिल्लामा विस्तार भएको छ । यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ११ करोड रहेको छ । अधिकृत पुँजी भने २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेशनलले २७ प्रतिशत लाभांशमा २१ प्रतिशत बोनस दिएको छ भने महिलाले १० प्रतिशत बोनस दिएको छ ।
मोरंग व्यापार संघ समेतको सहकार्यमा संचालित विज्नेश इन्कुवेशन सेन्टरको डेमो डे सम्पन्न
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा विकास एवं सहकार्यका लागि मोरंग व्यापार संघ सहित आइडिया स्टुडियो नेपाल,
काठमाडौं । प्लाष्ट नेपाल फाउण्डेशनले आज देखि १४ गते शनिवार सम्म तदनुसार मे महिनाको २६,